Xulka Ingiriiska oo u soo gudbay rubac dhammaadka Koobka Adduunka | Saxil News Network
Xulka Ingiriiska oo u soo gudbay rubac dhammaadka Koobka Adduunka
July 4, 2018 - Written by editor
Image captionXulka kubadda cagta ee Ingiriiska oo dabaaldegaya
Xulka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska ayaa markii ugu horreysay ciyaar ka tirsan Koobka Adduunka waxa uu ku badiyay rigoorayaal uu uga adkaaday xulka Colombia.
Xulka Ingiriiska ayaa waxa uu rubac dhammaadka tartankaasi la dheeli doonaa xulka Sweden.
Eric Dier, ayaa xulka Ingiriiska u dhaliyay gool ku laadkii ay guusha ku raacday kaddib markii goolhaye Jordan Pickford uu si qurux badan goosha uga celiyay laad uu soo ganay Carlos Bacca oo Colombia ka tirsan.
Guushan weyn ee uu Ingiriisku gaaray waxa ay ka dhigan tahay in rubac dhammaadka Koobka Adduunka uu kaga hor tegi doono xulka Sweden oo ay Sabtida wada dheeli doonaan.
Guusha ay gaareen ciyaartoyda tababare Gareth Southgate ayaa waxa ay noqonaysaa middii ugu horreysay ee ay tartan weyn kaga gudbaan ciyaaraha kala baxa tan iyo 2006.
Ingiriiska ayaa waqtiga caadiga ah ee ciyaarta waxa uu ku hormaray gool ku laad uu u dhaliyay Harry Kane, hasayeeshee ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay ee ciyaarta ayaa goolka barbarada waxaa Colombia u dhalilyay Yerry Mina, ciyaartuna waxa ay 90-ka daqiiqo ku soo dhammaatay barbaro 1-1 ah.
30 daqiiqo oo dheeraad ah ayaa lagu daray ciyaarta si labada xul loo kala saaro balse waxba way iska dhalin waayeen, waxaase ugu dambayntii lagu kala baxay gool ku laadyo loo dhigay, Ingiriiskana wuxuu sidaas uga mid noqday siddeeda kooxood ee weli ka sii qeyb qaadanaya Koobka Adduunka